News - British Glass wuxuu ka dhawaajiyay silsiladda cabitaanka sahayda cabitaanka ee ku saabsan Scottish DRS
British Glass wuxuu ka digay in ganacsiyo badan oo muhiim u ah silsiladda sahayda khamriga ay si xun saameyn ugu yeelan doonaan Qorshaha Dib-u-celinta Isboortiga ee Scotland (DRS).
Dave Dalton, madaxa fulinta, British Glass, Shirweynihii Xirmooyinka Deegaanka
Sababta oo ah in la soo bandhigo 2022, British Glass wuxuu sheegay in walaacyada ay ka mid yihiin burburka suurtagalka ah ee dib-u-warshadaynta kerbside ee dhalada, kordhinta mugga baakadaha caaga ah iyo CO2 uumi baxa.
Madaxa fulinta Dave Dalton ayaa warqad u qoray Dowlada Scottish-ka isagoo sharaxaya walaacyadan, wuxuuna sheegay in British Glass ay sameyn doonto waxkasta oo suuragal ah si ay u hagto hirgelinta DRS si loo hubiyo in qodobbada muhiimka ah la tixgeliyo isla markaana laga codsado kursi ay ku yeeshaan wershadaha kooxda La-talinta Hirgelinta. arin deg deg ah.
Dhanka kale, wuxuu sheegay in shaqada kala-wareejinta ay sii wadayso la shaqeynta Boqortooyada Ingriiska ee Glass Futures iyo xarunta Friace ee mustaqbalka mustaqbalka ee Jarmalka.
Mustaqbalka muraayadda ayaa noqon doona xaruntii ugu horreysay ee si furan ee dunida laga heli karo, xarun muraayado kala duwan oo milateri iyo xarun weyn oo cilmi-baaris ah oo loogu talagalay ilaha shidaalka ee loogu talagalay in lagu isticmaalo foornooyinka - waa qodobka ugu muhiimsan ee ka caawinaya waaxda quraaradda inay gaaraan bartilmaameedkeeda si ay u ogaato 2050 oo ay noqoto shabaq. eber saarista kaarboonka.
Fournace-ka dhowaan la shaaciyay wuxuu noqon doonaa foornadii ugu horreysay ee batroolka-macdanta-batroolka oo noqota 80% tamarta la cusbooneysiin karo ee adduunka. Waxay beddeli doontaa ilaha tamarta-shidaalka ee hadda jirta waxayna yareyn doontaa qiiqa CO2 illaa 60%. Midda kale marka hore, labaatan soosaarayaasha weelka dhalooyinka ayaa ka wada shaqeynaya maalgalinta mashruuca tijaabada ah iyo caddeynta fikradda. Ardagh Group waxay ka dhisi doontaa foornada Jarmalka sanadka 2022, iyadoo qiimeynta natiijooyinka ugu horreysa la filayo 2023.
DRS xeerarkii waa la maray galabnimadii shalay (13ka Meey) in kasta oo wicitaanada laga keenay warshadaha, macaamiisha, iyo MSPs ee mucaaradka in dib loo dhigo.
Xubnaha SNP (36) waxay u codeeyeen in ay raacsan yihiin xisbiga muxaafidka ah ee codaynta ka soo horjeeday (16) iyo shaqaalaha iyo xisbiga Liberal Democrats ka gaabsaday (19).
Isaga oo faallo ka bixinaya natiijada, Dave Dalton, madaxa fulinta Glass ee Ingiriiska wuxuu yiri: “Kaliya kuma aanan ahayn in aan weydiisanayno dowladda Scotland inay dib u dhigto shuruucda DRS ilaa inta laga ogaanayo saameynta COVID-19. Ganacsiyo badan, oo ay kujirto qaybta warshadeena iyo silsiladda sahaydu ma ahan kuwo ku habboon inay wajahaan culeyska dheeraadka ah ee qorshuhu ku dul ridi doono.
"Waxaan sii wadaynaa aaminaadda ah nooc kale oo ah Mas'uuliyadda Xilsaarista Soo-saare (Ba'du) kordhinta heerarka dib-u-warshadaynta ee dhalada, noqonaysa mid qaalisan oo bixin doonta laba-jibbaarka CO2 kaydinta ayaa ka badan tan DRS ee Scotland.
“In kasta oo aanan rumeysanahay in DRS ay tahay xalka saxda ah ee dib u warshadaynta dhalada, waxaan la shaqeyn doonaa Dowlada Scotland iyo maamulaha mashruuca si aan u yareynno waxyeelada ka soo gaartay warshadaha galaaska ee Scottish-ka isla markaana aan hubinno sicirka ugu sarreeya ee suurtagalka ah ee dib u warshadaynta si loo helo tayada muhiimka ah iyo Tiro yar oo geedo ah ayaa looga baahan yahay soosaarayaasha galaaskeena.
Waqtiga boostada: Jun-04-2020
Cinwaanka:Qolka 1106, Dabaqa 11 (Xuzhou Ardayda Ardayda Venture Park), No.271, Wadada Qingnian, Degmada Yunlong, Xuzhou